ब्रेन एन्ड ब्युटी : डा आस्था दवाडी :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ब्रेन एन्ड ब्युटी : डा आस्था दवाडी
मंगलबार, वैशाख १८, २०७५, ०९:२२:३२
डा आस्था दवाडीले भर्खरै एमबिबिएस सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेकी छन्। उनले बंगलादेशको जैनुल हक सिक्दर वुमेन्स मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस गरेकी हुन्। ब्राइट फ्युचर सेकेन्डरी स्कुल नैकापबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी आस्थाले युनाइटेड एकेडेमीबाट उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा लिएकी हुन्।
पढाइ बाहेकको समयमा उनलाई लेख्न र पेन्टिङ गर्न मनपर्छ । लेखनमा पनि कविता लेखनमा विशेष रुची राख्छिन्। चिकित्सा क्षेत्रप्रतिको सानैदेखि आकर्षण भएकाले डाक्टर पढेको उनी बताउँछिन् । विशेषज्ञता भने शल्यक्रिया वा नाक, कान र घाँटीमा गर्ने उनको चाहना छ ।
तस्बिर : शिवलाल श्रेष्ठ, तस्बिर स्टुडियो, बागबजार
फुटपाथमा हिँडिरहेका डाक्टरमाथि ट्राफिक प्रहरीद्वारा कुटपिट, कारबाहीको माग गर्दै निवेदन ४ घण्टा पहिले
हैजासम्बन्धी समस्या पर्‍यो? ११८० मा फोन गर्नुस् ५ घण्टा पहिले
विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भेटियो ९ घण्टा पहिले
बिना अप्रेसन कसरी निकालियो पेटभित्र अड्किएको चम्चा? १० घण्टा पहिले
थप ४१ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित २०० नाघे १० घण्टा पहिले
अष्ट्रेलिया जानुअघि गरिने मेडिकल चेकअपको नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय, नर्भिकले दियो उजुरी ११ घण्टा पहिले
नारायणी अस्पताल: विपन्नको उपचारमा १९ लाख खर्च १२ घण्टा पहिले
गर्भ जाँच गराउँदा अण्डा उपहार १२ घण्टा पहिले
छोरी जन्माएर बन्ध्याकरण गर्ने दम्पतीलाई करमा छुट १२ घण्टा पहिले
उपत्यकाका चार ठाउँको पानीमा हैजाको जीवाणु १३ घण्टा पहिले
पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया निकाले १५ घण्टा पहिले